‘पेट सिटीस्क्यान’ सञ्चालन नहुँदा बिरामी मारमा
काठमाडौं । झापाको विर्तामोडस्थित पूर्वाञ्चल अस्पतालले क्यान्सर बिरामीका लागि ल्याएको पेट सिटीस्क्यान सञ्चालनमा नआउँदा त्यस्ता बिरामी मारमा छन् । सिटीस्क्यान उपकरण आइसक्दा पनि सञ्चालन अनुमति नपाएर एक वर्षदेखि थन्किएर बसेको छ ।
उपकरण सञ्चालन नहुँदा त्यस्ता बिरामीे महँगो खर्च गरेर भारत जान बाध्य भएका छन् । सो उपकरणले क्यान्सर कहाँसम्म फैलिएको छ, उपचार कस्तो भइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउने गरिन्छ । यसले गर्दा चिकित्सकलाई क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार गर्नका सहज हुने गर्दछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद गर्न अनुमति दिए पनि सञ्चालनका लागि अनुमति नदिँदा त्यतिकै थन्किएको हो । कानून बन्न ढिलाइ गरेकाले अस्पतालले क्यान्सर बिरामीको उपचारका लागि ल्याएको उक्त उपकरण सञ्चालनमा समस्या समस्या आएको अस्पतालका निर्देशक डा वीरेन्द्र यादवको भनाइ छ ।
डा. यादव भन्छन्, ‘सरकारले कानून नबनाएकाले अझैसम्म सञ्चालन गर्न पाएका छैनौँ ।” “यसले हजारौ बिरामीले उपचार गर्न पाएका छैनन् सञ्चालनका लागि धेरै पटक कानून चाँडो बनाउन भन्यो तर सुनवाइभएको छैन,“ डा. यादवको गुनासो छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अस्पतालका लागि यो उपकरण आउँछ भनेर वातावरण्ीाय मूल्याङ्कन प्रभाव (इआइए) समेत पास गराए पनि कानून बन्न ढिलाइ भएकाले उपकरण सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । “मन्त्रालयले एक वर्ष अघिदेखि नयाँ ऐन बनाउनुपर्दछ भनिरहेको छ”, अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद प्रसाईँ भन्छन्, ‘उपकरण यतिकै थन्क्यिार राख्न मिल्दैन ।’
उपकरणद्वारा क्यान्सर रोगको पहिचान गर्न, बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिन मद्दत पुग्छ । यसैगरी यस रोगमा प्रयोग भएको औषधि शरीरमा प्रभावकारी भए नभएको तथा शरीरमा क्यान्सरको कण भए नभएको पत्ता लगाउने, तथा मुटु रोग तथा विभिन्न खाले दिमागको रोगको अवस्था जान्न पनि सघाउ पु¥याउने समेत उपकरणले गर्ने गर्दछ ।
बिरामीमा कुन तहको क्यान्सर भएको र त्यो कुन अवस्थामा छ भनेर जाँच गर्न पेट सिटीस्क्यानको प्रयोग गरिन्छ । करिब रु ७० करोडमा खरिद गरिएको उपकरणमा २४ घण्टा वातावरणनुकूलतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । उपकरण सञ्चालन नआउँदा मासिक रु २० लाख बैंकसहित अन्यमा खर्च भइरहेको छ ।
उपकरण सञ्चालनका लागि समेत न्यूक्लियर मेडिसिन चिकित्सकसमेत अस्पतालले एक वर्षदेखि तलब खुवाएर राखिसकेको छ । उपकरण सञ्चालन नभएपछि त्यतिकै ति चिकित्सक बसिरहेका छन् । पोखरा, चितवन, काठमाडौँलगायत ठाउँबाट बिरामी अस्पतालमा पेट सिटीस्क्यान उपकरण छ भनेर अस्पतालमा आउने गरे तापनि ती बिरामीलाई उपचार गर्न नपाएको अस्पतालका निर्देशक डा यादवले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौँमा रहेका दुई प्रयोगशालामा समेत पेट सिटीस्क्यान भएपनि कोभिड–१९ का कारण नियमित हवाई सञ्चालन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । नियमित उडान नहुँदा बिरामीको लागि लगाउने रेडियो आइसोटोप ल्याउन नसकेको कारणले काठमाडौँमा रहेका पेट सिटीस्क्यान उपकरण सञ्चालनमा नआएको हो ।
यसले गर्दा अहिले पेट सिटीस्क्यानका लागि क्यान्सरका बिरामी उपचारका लागि कलाकत्ता, नयाँ दिल्ली जाने गर्दछन । भारत जाँदा करिब रु पाँच लाख खर्च हुने गरेको छ तर नेपालमा अस्पतालले उपकरण सञ्चालनको अनुमति पाए आफूहरुले एक बिरामीको रु ६० देखि ७० हजारमा उपचार गर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
बिरामीका लागि उपचारका लागि उपकरण सञ्चालनसँगै ‘रेडियो आइसोटोप’ समेत प्रयोग गरिन्छ । रेडियो आइसोटोप ल्याएको चार घण्टाभित्र बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतको कोलकत्ताबाट खरिद गरेको दुई घण्टामा झापाको वित्तामोडमा उक्त रेडियो आइसोटोप आइपुग्दछ र बिरामीलाई समेत सजिलै उपचार गर्न सकिने भएकाले अस्पतालमा पेट सिटीस्क्यान जडान गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा यादवले जनाएका छन् ।
कोलकत्ताबाट सिलगुडीको वागडुग्रा विमानस्थलमा एक घण्टा र त्यहाँबाट आधा घण्टामा विर्तामोडमा उक्त रेडियो आइसोटोप ल्याइसक्ने भएकाले आफूहरुले बिरामीको उपचार गर्नका लागि पेटस्क्यान उपकरण राखिएको उनले बताए । अस्पतालका अध्यक्ष प्रसाईले मन्त्रालयले चाँडै कानून बनाएर उपकरण सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने बताउँछन् ।
उक्त उपकरणबाट दैनिक २० देखि ५० जना बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ । दक्षिणपूर्वी नेपालमा रहेको क्यान्सर अस्पतालमा स्थापना भएपछि नेपालसहित भारतबाट पनि बिरामी उपचार गर्नका लागि आउने गरेका छन् । अस्पतालमा निर्देशक डा यादव नेतृत्वमा डा प्रियङ्का कटुवालसहितको नौ सदस्यीय विशेषज्ञ टोली कार्यरत छ ।
अस्पतालका अध्यक्ष प्रसाईले क्यान्सरका बिरामीलाई नेपालमा नै उपचार गराउन उद्देश्यले अस्पताल स्थापना गरिएको बताए । उनले यहाँका विशेषज्ञ चिकित्सकले जस्तोसुकै क्यान्सरको पनि उपचार गर्नसक्ने बताए । अस्पतालमा सङ्क्रमण (एन्टिब्यक्टरिया) मुक्त शल्यक्रिया कक्षको समेत निर्माण गरिएको छ ।
मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो प्रत्यारोपण गर्नाका लागि सङ्क्रमणमुक्त शल्यक्रिया निर्माण गरिएको छ । उनले प्रत्यारोपण गर्न सजिलो र बचाउने गा¥हो पर्ने भएकाले सङ्क्रमणमुक्त शल्यक्रिया कक्ष निर्माण गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा यादवले बताए ।